Ireo no zanak’i Esao, izay naterany tany amin’ny tany Kanana. Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha? Aleoko homena anao izy, toy izay homena lehilahy hafa; tomoera eto amiko. Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin’ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mihainoa ahy, ka mba iangavio kely amin’i Efrona, zanak’i Zohara, 9 mba homeny ahy ny zohy ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin’ny sisin’ny sahany; amin’izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana. Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny.
Tsara ihany izy; ary, indro, tamy Rahely zananivavy mitondra ny ondry aman’osy. Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho, 44 ka hamaly hoe izy: Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, ka mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty. Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Fandrao maty aho noho baboly aminy.
Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao ppdf hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay kaatolika anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, baibopy ny teny fikasana nataon’Andriamanitra bakboly Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.
Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako? Dia hoy Josefa taminy: Ary Josefa dia bikàna sady tsara tarehy. Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao?
Tobin’Andriamanitra ity; ary ny anaran’izany tany izany karolika hoe Mahanaima. Ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina? Ireo no loham-pireneny avy tamin’i Elifaza tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Ada. Tsy ao ny zaza, ary izaho, aiza no halehako? Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy; dia nisy izany.
Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao: Efa meloka tokoa isika noho ny amin’ny rahalahintsika, satria nahita ny fahorian’ny fanahiny isika, raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba nihaino isika; koa izany no nahatongavan’izao fahoriana izao amintsika.
Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. King Of Fighters Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy katolikx tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay pdv nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao.
Inona izao nataonao kaotlika izao? Satria ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany.
Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23 fa tsy handray na taretra na fehin-kapa aza amin’izay rehetra mety ho anao katllika hataonao hoe: Tandremo mba baibboly ho baiobly miverina any ny zanako.
Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko. Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Nampoizin’iza akory moa no hilaza amin’i Abrahama fa hampinono zaza Saraha?
Handeha hiaraka amin’io lehilahy io va ianao?
An’i Jakoba mpanomponao ireo, dia zavatra nampanaterina ho an’itompokolahy Esao; ary indro koa izy ao aorianay ao. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin’ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa katoliks ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby.
Lea no anaran’ny zokiny, ary Rahely no anaran’ny zandriny. Dia nirahiny hiala avy teo amin’ny lohasahan’i Hebrona izy, dia nankany Kayolika. Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza kattolika heviny. Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka baboly olona aho noho ny amin’ny vadiko.
Mba ampisotroy rano kely aho. Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao?